Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Warshada alaabta ceeriin ee Shiinaha
Shirkadda GanoHerb Technology (Fujian) Corp
Sharaf & Shahaadooyin
Habbee Organo Gold Organ...
Ganoderma Cafe iibinta kulul...
Burk Organic Cell-derbiga derbiga...
Buk Ganoderma Lucidum Rei...
Afar Sigmatic Mushroom Coff...
Chaga likaha budada
Chaga, oo loo yaqaan Inonotus obliquus, waa fungus daawo ah oo ka baxa geedaha bjørk ee cad.Waxay inta badan ka baxdaa cirifka waqooyi ee loolka 40°~50°N, kuwaas oo kala ah, Siberiya, Bariga Fog, Waqooyiga Yurub, Hokkaido, North Korea, Heilongjiang ee waqooyiga Shiinaha, Buur Changbai ee Jilin, iwm.
Coriolus versicolor - sidoo kale loo yaqaan Trametes versicolor iyo Polyporus versicolor - waa boqoshaada polypore-ka ee laga helo adduunka oo dhan.
Coriolus versicolor waa boqoshaada daawada si weyn loogu qoray ka hortagga iyo daawaynta kansarka iyo caabuqa Shiinaha.Waxaa si aad ah loo caddeeyey in maaddooyinka laga helay Coriolus versicolor ay muujiyaan hawlo badan oo bayooloji ah, oo ay ku jiraan saamaynta kicinta ee unugyada difaaca ee kala duwan iyo joojinta koritaanka kansarka.
Shiitake likaha budada
Boqoshaada Shiitake (magaca sayniska: Lentinus edodes) waxaa lagu magacaabaa Shiitake gudaha Japan.Boqoshaada Shiitake waxaa lagu beeray Shiinaha kumanaan sano.Boqoshaada Shiitake waxaa ku jira noocyo kala duwan oo ah walxo bayooloji firfircoon oo lagu xaqiijiyay cilmi baaris cilmiyeed.Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nidaaminta difaaca, kordhinta caafimaadka lafaha, hoos u dhigista kolestaroolka iyo kor u qaadida caafimaadka wadnaha.
"Maitake" waxaa loola jeedaa likaha qoob-ka-ciyaarka ee Jabbaan, magaciisa latin: Grifola frondosa .Boqoshaada ayaa la sheegay in magaceeda la helay ka dib markii ay dadku qoob-ka-ciyaar ku farxeen markii ay ka heleen duurjoogta, kuwaas oo ah sifooyinka bogsashada ee cajiibka ah.
Grifola frondosa waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo maaddooyin noole firfircoon ah kuwaas oo lagu xaqiijiyay cilmi-baaris cilmiyeed.Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hoos u dhigista cadaadiska dhiigga, hoos u dhigista sonkorta dhiigga, kor u qaadida difaaca, ka hortagga bararka, iyo ka hortagga xasaasiyadda.
Cordyceps militaris (magaca sayniska: Cordyceps militaris) iyo Cordyceps sinensis (magaca sayniska: Cordyceps sinensis), oo sidoo kale loo yaqaan boqoshaada tamarta, ayaa inta badan loo adeegsadaa daawada Shiinaha si ay u quudiyaan sambabada iyo kelyaha, una ilaaliyaan wadnaha.
Budada Libaaxa Mane
Manka libaaxa (Hericium erinaceus) waa nooc ka mid ah likaha dawada.Muddo dheer loo isticmaalo daawaynta dhaqameed ee Shiinaha, manka libaaxa ayaa si weyn loo heli karaa foomka kabka.Cilmi-baadhisyo sayniseed ayaa muujisay in manka libaaxu ka kooban yahay tiro maaddooyin ah oo caafimaadka dhiirrigeliya, oo ay ku jiraan antioxidants iyo beta-glucan.
Mushroomka manka libaaxa waxa ku jira noocyo kala duwan oo bayooloji firfircooni ah kuwaas oo lagu xaqiijiyay cilmi baadhisyo.Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ilaalinta caloosha, hagaajinta neerfaha maskaxda, hagaajinta xusuusta iyo awoodda garashada, iwm.
Jumlada Organic Ganoderma lucidum Extract
Soosaarida Ganoderma lucidum waa jidhka miro cusub oo bislaaday oo la goostay wakhtiga.Ka dib marka la qalajiyo, waxay qabataa soo saarista biyaha kulul (ama soo saarista aalkolada), feejignaanta faakuumka, qalajinta buufinta iyo hababka kale si loo helo budada Ganoderma lucidum soosaarida, taas oo ah xoojinta sare ee budada Ganoderma lucidum
Unug-dabiiciga ah ee gidaarka ah ee jabay budada Ganoderma lucidum Spore
Kudka ganoderma waa unugyada taranka budada ah ee laga soo saaro daboolka Ganoderma ka dib markii jidhka midhaha uu qaan-gaaro.Kubbad kastaa waa 5-8 microns oo keliya dhexroorka.Xadhkaha waxa uu qani ku yahay maaddooyin kala duwan oo bioactive ah sida Ganoderma polysaccharides, triterpenoids ganoderic acid iyo selenium.
100% Coriolus Versicolor Dabiiciga ah oo soo saara Trametes Versicolor Yunzhi Polysaccharides
Coriolus versicolor iyo polyporus versicolor - waa boqoshaada polypore-ka ee laga helo aduunka oo dhan.Macnaha 'midab kala duwan', versicolor ayaa si la isku halleyn karo u qeexaya fangaskan soo bandhigaya midabo kala duwan.Tusaale ahaan, sababtoo ah qaabka iyo midabada kala duwan waxay la mid yihiin kuwa turkiga duurjoogta ah, T. versicolor waxaa badanaa loo yaqaannaa dabada Turkiga.
Ganoderma-dabiiciga ah ee alaabta daryeelka caafimaadka
Jeexyada GanoHerb organic ganoderma sinense ayaa laga gooyay jir cusub oo si wanaagsan loo doortay oo log-doortay jidh-miro dabiici ah.Qaybaha si fiican loo jarjaray ayaa si toos ah loogu isticmaali karaa samaynta shaaha ganoderma, maraq karinta iyo khamri-qaadista.Waa doorasho qumman in la ilaaliyo caafimaadka maalinlaha ah, daaweynta cuntada iyo u soo bandhigidda hadiyad ahaan.1. Tilmaamaha: 20kgs/sanduuqa 2. Shaqooyinka ugu muhiimsan: Waxay kaa caawin kartaa in la nafaqeeyo tamarta isticmaalayaasha oo ay yareyso xanuunka la'aanta, qufaca, neefta, garaaca wadnaha iyo anorexia.3.Isticmaalka &...
Qiimaha Jumlada Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel
Saliida xabagta waxa ay adeegsanaysaa tignoolajiyada soo saarista CO2 ee aadka u saraysa si ay uga soo saarto xadhkaha bislaaday ee fuuqbaxay, kuwaas oo lagu soo saaro habraacyada qaadashada, nadiifinta, baadhista, jebinta gidaarka unugga heerkul hoose.
Qaybaha Ganoderma lucidum ee dabiiciga ah
Shirkadeena waa Qabyo-qoraalka Heerarka Qaranka Shiinaha ee Ganoderma lucidum (ama loo yaqaan Reishi), Ganoderma lucidum (ama loo yaqaan Reishi) labada walax ee ugu muhiimsan waa Ganoderma Lucidum (reishi) Polysaccharide iyo Triterpene.
Organic Ganoderma lucidum (Reishi) Alaabta leh USA, EU, Japan iyo Shiinaha shahaadada organic.ISO, HACCP, Xalaal, Kosher, iyo FDA waa la xaqiijiyay.
Muunad khudaar bilaash ah
Hal qayb oo ka mid ah FUJIAN XIANZHILOU NUTRAINDUSTRY CO. LTD.